ndiani mukurumbira wako doppelganger? Anwendung ichi achakuudza kunyange paine tsvuku mireza
Kuru Nhau & Ongororo Ndiani wako mukurumbira doppelganger? Ichi chishandiso chinokuudza kunyangwe paine matsvuku mireza
Ndiani wako mukurumbira doppelganger? Ichi chishandiso chinokuudza kunyangwe paine matsvuku mireza
Iri zhizha rapfuura, takakuyambira nezveFaceApp . Iyo AI-powered app inobvumidza vashandisi kuisa selfie uye voita shanduko kumufananidzo vachishandisa mafirita akasiyana anoita kuti vataridzike sevadiki, vakuru, kana kunyange kuchinja vara rebvudzi ravo. #AgeChallenge inoteedzera yakurudzira vashandisi vefoni kuti vagadzire mifananidzo yavo sezvavanogona kutarisa makore makumi matatu kusvika makumi mana mune ramangwana (uye kwete, kushandisa izvi pane pikicha yeiyo iPhone yako haikunde & apos; rega itore iwe uone kuti iyo iPhone 51 Pro Max ichaita sei ). Munguva yezhizha, FaceApp yaive ye # 1 yemahara yemahara uye # 2 yepamusoro-inotora app paApple App Store uye yaive neanopfuura mamirioni zana kuisa kubva kuGoogle Play Chitoro mwedzi makumi matatu mushure mekutanga kwayo.
Asi pakanga paine kunetseka kwega pamusoro peFaceApp, kunyanya pazvakazoonekwa kuti mutemo wega wega weapp & apos; s Russian yekuvandudza akaibvumidza iyo kuwana uye kuchengeta dhata renzvimbo yevashandisi uye nhoroondo yekutsvaga. Kunetsekana nezveFaceApp kwakatosvika kuSeneti yeUS uko Senate Minority Mutungamiriri Chuck Schumer (D-NY) akanyora Federal Trade Commission (FTC) ichikumbira kuongororwa. Iye CEO weWireless Lab, mugadziri weRussia kuseri kweapp, akataura kuti mapikicha chete akachengetwa anochengeterwa mugore uye ndeechinguva chisingapfuure maawa makumi mana nemasere. Mutungamiri akatiwo kambani ichabvisa mifananidzo kubva kumaseva ayo pakukumbira. (Kutora kwedu? Pane hutsi ipapo & moto weapos).
Gradient ichawana munhu wenhoroondo kana mukurumbira uyo ari wako doppelganger
Uye izvo zvinotisvitsa kune yazvino app sensation, Gradient, iyo inowanikwa kune ese ari maviri ios uye Android . Uyu mupepeti mupepeti uyo unopa nzira yevashandisi kugadzirisa kutaridzika kwemifananidzo uye selfies. Uye ikozvino yawedzera nyowani ficha iyo ina Jimmy Kimmel kurira. Iyi ficha nyowani inotora selfie-uye inowana munhu wenhoroondo kana mukurumbira akafanana nemushandisi (ndiani anogona kuzogovana zvabuda pasocial media). Kimmel akachinja kutaridzika kwenyika paapp paakaratidza vateereri vake terevhizheni mifananidzo kubva kuGradient iyo yakashandura husiku-husiku muterevhizheni kupinda Matt Damon. Vateveri vaKimmel vakawana kuseka kubva ipapo nekuti iye naDamon vave nenharo dzekunyepedzera pakati pavo kwemakore.
'Tinoda kuzivisa yedu nyowani FUN ficha - iyo chaiyo yakatarisika yakafanana-tekinoroji! Ona kuti ndeupi munhu wenhoroondo kana mukurumbira anotaridzika kufanana newe uye ugovana mhedzisiro yako inoshamisa neshamwari dzako seNhau kana Post! '- Gradient
Nepo Gradient yakasununguka kuisa pane yako foni, akati wandei maficha anoda anodzokororwa kunyoreswa. Unogona kukumbira mazuva matatu-emahara kuyedzwa mushure meizvozvo iwe & apos; uchabhadharwa $ 19.99 / mwedzi, kana iwe unogona kubvuma kubhadhara $ 4.99 pavhiki. Asi usati waisa iyo app, pane mamwe matsvuku mireza. Iyo yekushandisa & apos; s yekuvandudza, Tiketi kuMwedzi, Inc., hazvizivikanwe uye yedu yekutanga yambiro system (kuverenga chikamu chemashoko) inounza zvimwe zvakashata zvakaitika. Kutaurisa kwekutanga chaiko kunoti, 'Iri purogiramu rinotyisa. Ini ndoda kuzvinyoresa nekuti ini handina kana kugutsikana nemuyedzo wangu wepachena uye ini chaizvo ndinogona & apos; t. Iko hakuna nzira yekuzvinyora. Havasati vapindura email yangu. Uye ini handisi kuwana nhamba yefoni yeapp kana kusanganisa ivo & apos; zviri pasi. Izvi hazvina musoro. Ichi chizere chitsotsi. Ndichatsamwa kwazvo kana ndichibhadhariswa madhora makumi maviri pamwedzi pabasa randisingade uye ndisingakwanise kukanzura. Gadzirisa izvi. '
Jimmy Kimmel anofara neiyo Gradient app
Uye kana iko kutaura kusiri & apos; kunotyisa zvakakwana, vashoma vanotaura kuti zvakaoma sei kudzima mushure memazuva matatu emahara kuyedzwa kwapera. Kana iwe uchinyatsoda kutsvaga kuti ndeupi munhu wenhoroondo kana mukurumbira waunoratidzika, bvunza shamwari dzako. Kana kutumira yako selfie paTwitter uye uone kuti ndevapi vanonyorera kune vezvenhau saiti vanofanirwa kutaura.
Mireza mitsvuku inowoneka muGradient & apos; s chikamu chikamu mune yeGoogle Play Chitoro
iphone x inogara ichiratidzwa
gadza Java 8 pane mac
Samsung Galaxy Cherechedzo 8 inogona kuburitswa nenzira nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa (muUS)
Lenovo Tab4 akateedzana akakunda & apos; haigamuchire Android 8.1 Oreo kusvika Mbudzi
iOS 14 yakavanzwa maficha: Kudzosera Tap, Ruzha Kuzivikanwa
Samsung Galaxy S8 uye S8 + bhatiri hupenyu bvunzo mhedzisiro yabuda
Maitiro ekushandura otomatiki kugadzirisa uye kudzima pane mazhinji Android smartphones
Samsung Galaxy S7 unopisa unopisa uchiraja husiku hwese
Maitiro ekumhanyisa maviri maakaunzi epaFacebook aine ziviso kubva kune ese ari maviri ako Android kifaa
Mhando dzakanakisa dzinodhura dzevana-dzakanaka dzevana vako